DOWNLOAD NA-EBIPỤTA AKWỤKWỌ MAKA N'EFU NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Mbupu ihe odide 3.0
Iji mepụta akwụkwọ nke editọ ederede ngwa ngwa agaghị ezuru, ebe ọ bụ na ndị ikpeazụ enweghị usoro dị mkpa iji dozie otu mbipụta. Na nke a, nhọrọ kachasị mma ga-abụ iji usoro pụrụ iche nwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla ederede n'ime akwụkwọ nta na nkeji nkeji. Ndị a gụnyere akwụkwọ edemede, nke a ga-atụle n'isiokwu a.
Ikike ịmepụta akwụkwọ
Onye nbipute nke Akwụkwọ na-enye gị ohere ịmepụta akwụkwọ zuru ezu, nke ga-agụnye ọ bụghị naanị nke ibe, mana nwekwara ihe mkpuchi. Ọ na-enyekwa nhọrọ nke nhọrọ abụọ iji nyefe akwụkwọ ahụ akwụkwọ. Ị nwere ike ibipụta ya nke nta nke nta, tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọ bụla n'ime ihe nbipute ahụ n'otu n'otu, ma ọ bụ na nzọụkwụ abụọ, na-ebuba ngwaọrụ ahụ na akwụkwọ kwesịrị ekwesị, ma na-atụgharị mkpọ ahụ n'otu akụkụ mgbe e bipụtachara ya ka ị gaa n'ihu usoro ahụ.
Dị mkpa ịmara! Ihe omume ahụ na-arụpụta naanị na A5.
Na Printer Printer, e nwere window nke nwere ihe niile gbasara akwụkwọ ahụ e kere eke. N'ime ya, ị nwere ike ịhụ ihu ole peeji nke akwụkwọ ahụ ga-agụnye, ole edere ka achọrọ na otú e si ebipụta ya. A na-atụ arokwa ihe e kwesịrị ime n'usoro obibi akwụkwọ ahụ.
Ikike imepụta ihe mkpuchi;
Ojiji dị mfe;
Anya nlele nke eserese mbipụta.
Mbipụta na-apụta nanị na akwụkwọ mpịakọta A5;
Eji ebipụta 4 peeji nke ọzọ.
The Printer Printer na-enye onye ọrụ aka ngwa ngwa ibipụta otu akpa n'akpa uwe akwụkwọ ha kachasị amasị, nke ị ga - eji gị gaa ebe ọ bụla ị na - aga. Ọ dịkwa oke maka ịmepụta broshuọ na akwụkwọ nta dị iche iche. Na nke a, usoro ihe omume ahụ nwere akwụkwọ na-agụnye ihe niile gbasara ezi ojiji ya. Ọ dịghị achọ nkwụnye ma kesaa kpam kpam n'efu.
Ibudata Mbipụta Akwụkwọ maka n'efu
Wordpage AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Ngwa maka ịgụ akwụkwọ na iPhone Ngụgharị akwụkwọ ọgụgụ maka gam akporo
Onye na-ebipụta akwụkwọ bụ ụzọ dị mma isi mepụta akwụkwọ, broshuọ ma ọ bụ akwụkwọ nta n'enweghị nsogbu ndị na-enweghị isi, nakwa n'ihi ntakịrị nkesa ya na enweghị mkpa maka nrụnye, ọ nwere ike ịgba ọsọ na PC ọ bụla site na mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista, 2000, 2003
Onye Mmepụta: Alexey Ilyin Merkuryevich